China pp corrugated partiton emeputa na soplaya | Sihai
pp corrugated nkebi
Pp corrugated partiton, p oghere mpempe akwụkwọ divider, makwaara dị ka nkebi, na gburugburu ebe obibi-echebe e ji mara, ọ bụ pp oghere mpempe akwụkwọ dị iche iche na ngwaahịa mere ahaziri udi na size maka iche iche na-echebe ngwaahịa, pp oghere mpempe akwụkwọ nkebi ọtụtụ-eji na ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa, mbupu, storages, ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ahịa na ntụgharị ngwaahịa.
A na - eji kaadi mma pp oghere pp oghere gburugburu ebe obibi, wee deecut ma ọ bụ deeline akara a tụrụ anya ya, wee chịkọta ya site na mpempe aka. Ọ nwere ike gbochie ọgbọ nke ọkụ eletrik na - agbanwe agbanwe, na - asị nke ọma Omenala akwukwo akwukwo nke iwepu ntutu, mmiri mmiri na nsogbu ndi ozo, ngbanwe ngwaahịa, nchedo zuru oke, mbufe, ihe ndi ozo, ihe ndi ozo, meputa ihe ndi ozo.
Ojiji nke p corrugated nkebi
Ihe ịchọ mma, ekwentị mkpanaaka, bọọdụ sekit, ngwaahịa eletrọniki, akụkụ ekwentị, akụkụ mkpanaka, akụkụ iphone, akụkụ kọmputa na ndị ọzọ na-agbanwe ngwaahịa, mbupu, ebe nchekwa na ụlọ nkwakọba ihe. Nkwakọ ngwaahịa nke akụkụ akpaaka, ngwaahịa elektrọnik, ngwa ụlọ.
The pp oghere oghere divider dị ka dị iche iche na ngwaahịa nwekwara ike mere ESD nkebi, ESD divider, conductive nkebi, foma nkebi, pp oghere mpempe partit, pp oghere mpempe akwụkwọ nkewa na EVA, Eva partiton, mgbochi-static EVA partiton, ESD EVA nkebi, na-ekpo ọkụ ịgbado ọkụ divider igbe, na-ekpo ọkụ gbazee partiton.
Nke gara aga: p corrugated n'ala chebe mpempe akwụkwọ
Osote: pp oghere mpempe akwụkwọ, p corrugated mpempe akwụkwọ